Imimoya "Armel": ukubuyekezwa. Kungani amakha French zishibhile ngakho
Ngokuqinisekile wonke owesifazane uzama ukuthola Iphunga owawuzoba Lifanele ke, wembula nezimbali ezinhle, kwaba ukumelana ukugqoka futhi konke lokhu ngeke abiza imali eshisiwe. Kuphi ukuthola "isimangaliso" amakha ezinjalo? Impendulo kuwe ukunikeza imimoya inkampani "Armel". Uphenyo ngakubo sisho lukhulu mayelana. Kodwa ake zonke ukuze.
IFrance isitayela Russian
"Armelle" Inkampani inkampani Russian, okuyinto waziphatha yokukhiqiza amakha premium. Esikhathini izingoma ezingaphezu kwamaphesenti angu-amabili amafutha yemvelo kanye izithako izinga okusezingeni uthenge kuphela phesheya. Inkampani usemncane futhi eziningi zithembiso kumthengi Russian.
Imimoya "Armel", okuyinto Izibuyekezo mihle kakhulu, zenziwe kusukela izinga okusezingeni eliphezulu izinto zokusetshenziswa zaseFrench kuphela. Imimoya ezembulwa ngamanothi ezintathu, ukuthi kakade ubonisa imfanelo enhle. Ayikho iphunga angaphandle noma engama synthetic chemicals amanothi ezicashile uzizwa uma usebenzisa lo mkhiqizo. On ukutshela eliphezulu kakhulu futhi izitifiketi, okuyinto wawuthi yonke izithako futhi izingxenye alithenga eFrance ukuhambisana nayo yonke amazinga kanye nokudingekile.
Phela, inkampani ekhiqiza eshaweni si, umzimba balms, isimo, amashampu futhi isimo. Abathengi ukuba ukuqaphele ukuthi akukho ukungcola eziyingozi kanye izithasiselo (i-sodium lauryl sulfate, parabens futhi t. D.) Ngo ukwakheka engashiwongo. Lokhu, ubona, abakwazi kodwa jabulani.
Kungani ezishibhile ngakho?
Cishe lena yiyona umbuzo lokuqala elivela uma unquma ukuthenga amakha "Armel" Izibuyekezo ukufunda noma nje ukushintshanisa imibono nabangani. Zonke kuchazwe impela nje. Njengoba inkampani itholakala nokusebenza ezweni lethu, evala zokuhamba, amasiko kanye nokunye. D. Cha Eyesibili iphuzu - sha. Zonke imimoya yenziwa, ngokwezindlu zooyise, nenkampani brand noma umkhiqizo emaphaketheni engakhokhi, kwenza imikhiqizo ishibhile.
Iphuzu lesithathu - izitsha eziyisikhombisa. Ngo Izibuyekezo eziningi ungathola imibuzo ephathelene umklamo ofanayo flavour. Ake ucabange. Ukuthenga ezibizayo amakha uphawu, sihlanganyela imali esibunikezayo ngokuba ibhodlela yasekuqaleni, okuyinto has a logo abadumile. Kodwa kungani ukukhokhela ibhodlela, kubalulekile uma kuhlukile? Futhi - elikuqukethe.
Le nkampani ekhiqiza amakha ukuthi zigcwele phakathi isitsha esisodwa. Kodwa bheka stylish. Zenziwa high kakhulu ingilazi Italy. Ningalwi. Kulula kakhulu futhi elula. Futhi konke lokhu, izitsha eziyisikhombisa akazange enze umoya wakho ephakeme. Aint it Izinzuzo ebaluleke lomkhiqizo?
Indlela ligcinwe umzimba
Njengoba kwaziwa kahle amakha engabizi ngokushesha okukhulu, "izimpukane" emzimbeni futhi izimisele yini ukumelana. abazange baziphathe, anothi, amakha "Armel 111" kanjani? Izibuyekezo zamantombazane nabesifazane abaye esetshenziswa iphunga, bathi, ukuthi imimoya amelana kakhulu, ngoba akhiqizwa ngokuhambisana namazinga omhlaba. Ukwahlulela ukubuyekezwa, egqoke isikhathi kuzoya ngohlobo imimoya. Ngokwesibonelo, ezisawolintshi flavour agcinwa kwaphela cishe amahora amane, ezimibalabala - cishe amahora ayisithupha. I eziphikelelayo kakhulu futhi eside edlala, njengoba kufanele kube ngokuvumelana nezindinganiso zamazwe ngamazwe, kukhona ako empumalanga - amahora lasiphohlongo nobe layimfica.
Perfume № 119
Kusukela inkampani "Armel" imimoya 119 Izibuyekezo uqinisekise ukuthi, kukhona phakathi likufuna kakhulu amakhasimende kanye ethandwa kakhulu phakathi kwabesifazane. Ziyakwazi ngokumangalisayo ukukhanya Iphunga ezimibalabala, futhi laba nomuzwa amanothi patchouli, must, amaqabunga tea, jasmine, peony mhlophe futhi magnolia nomvini. Lokhu Iphunga is eside kakhulu ezigugile, ezizungezile senkosikazi yayo magic imbali magic. Izibuyekezo bathi lokhu ingenye ngamakha isifazane kakhulu futhi ukukhanya kusuka eqoqweni.
Imimoya inombolo 109
Uma - ongumNdiya lisebenza futhi yabasubathi abasha futhi ufuna okuthile okusha nokukhanya ke unake imimoya ngaphansi inombolo 109. Langempela Izibuyekezo imimoya "Armel 109" niyikhulume inhlanganisela elimangalisayo imbali orange kanye jasmine (phezulu) bese patchouli, must futhi sandalwood (e base amanothi).
Lokhu Iphunga yindlela emangalisayo ukutshela mayelana ubungqabavu yakho, ubungqabavu, engenazinkathazo. It izovula wena nombono omuhle ngezinto ababegane unwabu ababesanda ivame ukubona izwe ngemibala egqamile futhi ujabulele zonke izinsuku.
Perfume № 134
Lokhu Iphunga futhi esiqongweni ukuthandwa, kodwa uma umuntu aphumelele othanda konke isiFulentshi, zikanokusho eyinkimbinkimbi. Amanothi phezulu kulesi Iphunga udlala amanothi elinuka of blackcurrant kanye eliphakathi kwe. Kamuva ukuvula "inhliziyo" amanothi jasmine, langa imibala orange kanye iris. Amazing vanilla iphunga ukhonza njengelungu base uma udala lo mkhiqizo. Imimoya "Armel" ngazo njengamanje izimpendulo uqinisekise ukuthandwa amakha 134. Abesifazane abaningi batusa njengoba boss omkhulu isipho noma isipho umngane.
Lokhu makha zikanokusho ngempela. Kuyinto inhlanganisela ephelele phakathi ubufazi ezifihliwe futhi ubuntu namandla. Rich ngokuphambene, izithako zemvelo, ngemali ephansi - yilokhu sifundzile zonke izibuyekezo mayelana lawo mafutha.
Lena akuyona ikhophi
Imimoya "Armel", ukubuyekezwa zazo sixoxa namuhla, akuyona ikhophi noma mbumbulu lemikhiqizo emhlabeni odumile. Lokhu akulona iqiniso elikhulu. Le nkampani inyathelisa amakha, okuyinto olunezinombolo, futhi akusho ukukopisha amagama nezinye iziphuzo ezinamandla. I ako le nkampani nje amanothi samanje, okuyinto efana ncamashí flavour athandwayo.
Zonke perfume amabhodlela ziyafana. Okuwukuphela umehluko izinombolo. amakhasimende abaningi bathi lula izitsha eziyisikhombisa 50 ml. Futhi nesikhwama sakhe semali sikhona ukubeka elula, hhayi kanzima ekhaya phezu umbophi eziningi izindawo ungathathi, bheka stylish futhi emuhle. Kodwa le ncwadi esanele ukusebenzisa isikhathi eside kakhulu le mimoya. Izibuyekezo zithi inothi ngalinye kuvula ngomlingo, kusale umnikazi we iphunga olubucayi umzila emnene.
Nguyenhanh Weekend - ukukhanya kanye amakha Airy libalele
Ubani futhi izimonyo lapho yasungulwa: indaba ezithakazelisayo
Eau de Toilette Dolce Gabbana - ingxubevange iphunga
Uwoyela Jojoba: isicelo ngezinhloso ayeyisimonyo
Uyini Mascara engcono? Izibuyekezo umthengi
Izinwele udayi "Loreal Ekselans"
I-hydrangea enenhliziyo enhle - ishiya ngezikhathi ezahlukene zonyaka
NHL - ke ... NHL: emagama, abadlali, umlando
Ionizing emisebeni - kuyinto umthelela ionizing emisebeni ...
Kanjani ukubuyisela ipasipoti
Alexander Gradsky: Biography, lokusungula, empilweni yakho
Amanzi apharathasi izwe indawo
Biography Admiral Nakhimov: ekufezeni umuntu Amazing
Izingcaphuno best of the imidlalo
Ngingalutholaphi ukuthola gastroenterologist okuhle eMoscow? gastroenterologist Kuhle eMoscow
Ngasiphi yobudala anganika uju ingane? Sifunda!